गजल महोत्सव, घोषणापत्र र ३ नं बुँदाको सकस – Chitwan Post
गजल महोत्सव, घोषणापत्र र ३ नं बुँदाको सकस
लामो समयदेखि सोचिरहेको थिएँ एउटा लेख लेखूँ– बहरवादी र गैरबहरवादीको बीचमा रहेर, गजलको मध्यरेखामा बसेर । अनावश्यक बहस उठाएर नेपाली साहित्यमा टाउको उठाउन खोजिरहेको गजल विधालाई आफू–आफूमै झगडा गरेर राम्रोसँग अडिन पनि नदिन गरिएको अचेतन प्रयासलाई झक्झक्याऊँ भन्ने चाहना थियो । तर, सफ्टवेयर कोड लेखिरहेको वर्तमान समयमा बन्ला बन्लाजस्तो लागेको गजलको एक शेरलाई पनि नलेखी बसेको अवस्थामा लेख नै लेख्ने हिम्मत बनिरहेको थिएन । फेरि गजल महोत्सवमार्फत मैले लेख्नै नपर्ने गरी केही आउला भन्ने लागेको थियो । तर, महोत्सवको घोषणापत्रले झन् अन्योलता बढाएको देखियो । घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्नेहरुले यसलाई प्रस्ट्याइदिएको भए हुनेथियो, तर उहाँहरुमै अन्योलता भएको हो कि जस्तो पो प्रतीत भयो । कामका कुराहरुलाई यथावत् छोडिदिएर यो लेख लेख्दैछु, मैले जे बुझेँ त्यो लेख्दैछु ।
निकै राम्रो सुरूवात भयो, प्रज्ञाप्रतिष्ठानको पहलमा गजल महोत्सवको आयोजना भयो । गजललाई सौतेनी व्यवहार गरियो भन्ने हल्लाहरुको बीचमा प्रतिष्ठानले गजललाई स्थान दियो महोत्सवको रुपमा । त्यो पनि २२ सालदेखि आयोजना गरिएको कविता महोत्सवको गरिमालाई माथ गर्ने गरी (कार्यक्रम समीक्षक डा. बिन्दु शर्माले भन्नुभएको हो) । आयोजकले छनोटमा केही कमजोरी भएको भए आगामी दिनमा सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएको पनि छ । यो कुरालाई यत्तिमै बिट मारौँ, नत्र मूल विषय पछि पर्छ ।
प्रमुख अतिथि बोलाइनुभएका माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराई अनुपस्थित भएपछि सभाध्यक्षले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभयो । जाबो गजलको कार्यक्रम लाग्यो या साँच्चीकै समय मिलेन, त्यो उहाँ वा उहाँनिकटलाई नै थाहा होला । तर, उहाँको अनुमति लिएर कार्यक्रम अघि बढ्यो । केही मन्तव्य, केही शुभकामना र केही तालिकाबीच उद्घाटन सत्र सकियो । गजल वाचनको सत्र सुरू भयो । वाचन भनिए पनि तरन्नुममा थुप्रै गजलहरु प्रस्तुत भए । यहाँसम्म कि तरन्नुमको सेसनमा छानिएका केही स्रष्टाहरुको भन्दा पनि राम्रा आवाज यसमा सुनिए । दर्शक, स्रोताले रूचाएका गजलहरुमध्ये अधिकांश गजल तरन्नुममा थिए ।
त्यसपछिको तरन्नुमको सेसनमा पनि केहीलाई छोडेर राम्रा गजल र आवाज सुनिए जसलाई ‘मास’ले पनि अनुमोदन ग¥यो । मलाई चाहिँ मासले गजल बहरमा वा गैरबहरमा भन्ने बहसलाई पछि पारेर गजल तरन्नुममा नै सुनाउनुपर्छ भन्ने अनुमोदन गरेको महसुस भयो । यो मेरो व्यक्तिगत अनुभूतिमात्रै पनि हुन सक्छ ।
दोस्रो दिन कार्यपत्र (गोष्ठीपत्र) प्रस्तुत भए । परिसंवाद आयोजना भयो । प्रादेशिक प्रतिवेदन सुनाइयो । परिसंवादको विषय पूर्वजानकारी नगराइएको भए पनि अनुमान गरिएअनुरुप गजलमा बहरको प्रयोगको विषयमा नै केन्द्रित रह्यो । कार्यपत्र र परिसंवादको समयमा अलिअलि चर्का स्वरहरु सुनिए । तर, सामाजिक सञ्जालमा बहरमा गजल नलेख्ने स्रष्टाहरुको शब्द जति चर्को लाग्थ्यो, कार्यक्रममा आवाज त्यति चर्को लागेन । सायद, मञ्चमा ज्ञानुवाकर पौडेल हुनु र घोषणापत्र तयारी समितिमा बाबु त्रिपाठी र खगेन्द्र गिरी कोपिला भएपछि आफ्नो आवाजको सम्बोधन हुने कुरामा उनीहरु ढुक्क थिए । चर्को बोल्नेहरुमा बढीजसो बहर पक्षधरहरु हुनुहुन्थ्यो । एक त मञ्चबाटै घनेन्द्रले गुरूहरुलाई गालीसम्म गर्नुभएको थियो भने तलबाट आवाज शर्माको आवाज अल्लि चर्कै थियो । तपाईंहरुको आवाज सायद त्यस्तो नभएको हुन सक्छ, तर मलाई व्यक्तिगतरुपमा यस्तो लागेको मात्रै हुन पनि सक्छ । कार्यक्रम सञ्चालकले बारम्बार रोक्न खोज्दा पनि रोकिनुभएको थिएन । रोकिनु पनि भएन नि, आवाज दबाउन खोजियो भन्दैमा आफ्नो कुरा नराखी माइक छोड्न पनि भएन नि है ! बहरमा नै गजल लेख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने डा. घनश्याम न्यौपाने परिश्रमी (गोष्ठीपत्र तयारकर्ता), डा. कृष्णहरि बराल (घोषणापत्र तयारी समिति संयोजक), कार्यपत्रका समीक्षक डा. सनतकुमार वस्तीको आवाजमा शालीनता थियो । सायद, उहाँहरुको उमेरले पनि चर्काचर्कीमा सहभागी हुन सुहाउन्नथ्यो होला ।
कार्यपत्र १– ‘नेपाली गजल : परम्परा र प्रवृत्ति’ (टीकाराम उदासी)
डा. सनतकुमार वस्ती भन्नुहुन्छ– ‘गजलको कुनै विषय हुँदैन, यो त कालजयी हुन्छ ।’ बिम्ब र प्रतीकको प्रयोग हुने भएकोले यसमा प्रयुक्त बिम्बले कुनै पनि विषयलाई संकेत गर्न सक्छ र यस्तो गर्न नसक्ने शेर मर्छ । त्यो त कुनै अखबारको समाचारजस्तो हुन्छ भन्ने आसय उहाँ दिनुहुन्छ । तर, टीकाराम उदासीले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्र साना–साना चालीस विषयहरुको चर्चामा समेटिएको छ । न यसमा संरचनागत प्रवृत्तिको कुरा गरिएको छ, न बिम्ब र प्रतीकको प्रयोगको विषयलाई स्थान दिइएको छ । घोषणापत्रले बोलेको बहर वा छन्द वा मौलिक लय वा चमत्कारपूर्ण गजलको शेरका प्रवृत्तिको बारेमा नबोलीकन यो गोष्ठीपत्र समेटिएको छ । किनकि म छन्द, बहरको विषयमा चलिरहेको बहसको विषयमा बोल्न खोजिरहेको छु, यो कार्यपत्रको बारेमा थप बोल्दिनँ ।
कार्यपत्र २– ‘गजल सिद्धान्त र नेपाली गजलमा बहरको प्रयोग’ (डा. घनश्याम न्यौपाने ‘परिश्रमी’ र घनेन्द्र ओझा)
शीर्षकले सबै कुरा बोलेको छ । थप बोल्नुपर्ने कुरा केही छैन । अचम्म लाग्यो शीर्षक चयन ! गजल सिद्धान्तको बारेमा कार्यपत्र लेख्नुपर्ने समय हो यो जस्तो लागेको थिएन मलाई । गजलमा बहरको प्रयोगको कुरा गर्नुपर्ने भएकोले यसलाई सिद्धान्ततः प्रामाणित गर्नका लागि यो समावेश गरिएको हुन सक्छ । तर, कार्यपत्रमा तिनै कुराहरु छन् जुन केही वर्ष पहिले नै प्रकाशित पुस्तक ‘गजल सौन्दर्य र मिमांशा’मा उल्लेख छन् । फेरि यो पुस्तक अरुले नभई स्वयम् कार्यपत्र लेख्नुहुने गुरू घनश्याम परिश्रमीले लेख्नुभएको हो । यो कार्यपत्र दोहो¥याएर पढ्नुमा खासै फाइदा देखिनँ । घनेन्द्र ओझाको पुस्तक मैले पढ्न पाएको छैन, त्यसैले बोल्न सकिनँ ।
थप एउटा कुरा अचम्म लाग्यो ! घनश्याम परिश्रमीले केहीपटक दोहो¥याउनुभयो कि यो कार्यपत्र दुई जनाले मिलेर तयार गरेको भए पनि उहाँहरु दुवैजनाका केही कुराहरुमा असहमति छन् । पहिले नै गजलकारहरु अन्योलमा छन् । अग्रजहरुको विवादको बीचमा के सही र के गलत भन्ने निक्र्योल निकाल्न नयाँ पुस्तालाई फलामको चिउरा चपाउनुभन्दा कठिन भइरहेको छ । बहरमा लेख्नैपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न नसकिरहेको अवस्थामा मात्रा गिराउन पाउने कि नपाउने भन्ने अर्को जटिलता छ भन्ने सुन्दा नयाँ पुस्ता बहरको नाम सुन्नेबित्तिकै चार कोश पर भाग्ने अवस्था सृजना हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । तपाईंहरु आफू–आफूमै सहमत हुन सक्नुभएको छैन, बहरमा लेख्न पर्दैन भन्नेहरुलाई सहमतिमा ल्याउन झन् कठिन हुन सक्छ भन्ने लागेन ? पहिला आफू–आफूमै समझदारी त बनाउनुस् ।
‘अमीर खुसरोदेखि आजसम्म गजलको परिभाषाका हजारौँ पुस्तकहरु प्रकाशित भए, तर राम्रो शेरको परिभाषा स्वयम् त्यही शेर हो’ – शकील आजमी ।
कार्यपत्र प्रस्तुतिको क्रममा घनेन्द्रले बारम्बार ‘शास्त्र’ शब्दको प्रयोग गर्नुभयो । पूर्णतः गजलको सैद्धान्तिक मान्यता र परम्परालाई मात्र यस कार्यपत्रमा समेटिएको छ । गजलको परम्परागत शास्त्रीय मान्यताबाहिरका रचना परम्परालाई यस गोष्ठीपत्रको अङ्ग बनाइएको छैन । कार्यपत्र हो कि गोष्ठीपत्र भन्ने नै अन्योल भयो । कतै गोष्ठीपत्र कतै कार्यपत्र लेखिएको छ । यी दुइटैको अर्थ एउटै होला सायद । त्यसैले, मेरो यो लेखमा पनि कतै कार्यपत्र कतै गोष्ठीपत्र लेखेको छु । यहाँ उल्लेख गरिएको र तपाईंले बारम्बार व्यक्त गर्नुभएको शास्त्र कुन रहेछ भन्ने लाग्यो । अमीर खुसरोले पहिला शास्त्र तयार गरेर गजल लेख्न सुरू गरेका रहेछन् कि ? कि त्योभन्दा पनि पहिला कसैले लेखिदिएको शास्त्रको आधारमा उनले गजल लेख्न सुरू गरेका हुन् ? मलाई गजलको शास्त्रीयतामाथि कुनै आपत्ति छैन । विरोध पनि होइन र मैले नमान्ने गरेको वा मान्दिनँ भन्न खोजेको पनि होइन । तपाईंको शास्त्रमा अटाउन नसकेका गजलहरुको माया लागेकोले मात्रै यसमा अल्झिएको हुँ । अस्ति तपाईंहरुले तयार गरेको जस्तै घोषणापत्र कसले कहिले तयार गरेर गजल यस्तै हुनुपर्ने भनेर बनाएको रहेछ ?
लामो समयसम्म अभ्यास भएको उस्तै शैलीमा लेखिँदै आएको रचनाविशेषलाई सैद्धान्तिक रुप दिएर पछि शास्त्र तयार भएको पो हो कि ? अँ, कविता पहिला जन्म्यो होला कि यसका सिद्धान्त पहिला बने होलान् ? ‘कुखुरा पहिला कि अण्डा’ जस्तो जटिल छैन यो प्रश्न ! सिद्धान्ततः अभ्यासको आधारमा बन्दै जाने होलान् नि होइन र ? शास्त्र त पछि बन्ने होलान् नि होइन र ? फेरि तपाईंले कुन अकाट्य शास्त्र फेला पार्नुभयो जसले युगलाई छैटौँ शताब्दीमा अल्झाएर राखेको छ ? उ बेलाको अभ्यासलाई लिएर गजलका सिद्धान्त बनेजस्तै यो बेलाको अभ्यासमा सिद्धान्तमाथि पुनर्विचार गर्न नमिल्ने हो ? खैर, यी प्रश्न त यत्तिकै राखेको हो । खास प्रश्न यो हो कि शास्त्रको कति प्रतिशत कुरा मान्यो भने त्यो शास्त्रसम्मत हुन्छ ? एउटा बहरको कुरा पुगेन भनेर गजललाई ‘खारेज’ भएको भनिन्छ । जीवनमा अरु कति
शास्त्र छन् होला जसको पूर्णरुपमा पालना गरिएको होस् र अलिअलि पालना नगर्नेलाई ‘खारेज’ गरिएको होस् !
तपाईं हिन्दुधर्म मान्नुहुन्छ भन्ने पक्का गर्न मलाई केही समय लाग्यो । फेसबुकमा धेरैबेरसम्म पोस्टहरु खोजेपछि तपाईंले दसैँ र तिहार मानेका फोटाहरु हेरिसकेपछि मलाई पक्का भयो तपाईं हिन्दु हो भन्ने । अस्ति कार्यक्रममा भेट्दा तपाईंलाई हिन्दुधर्म र यसका शास्त्रले निर्धारण गरेका थुप्रै कुराहरुविहीन देखेको थिएँ । निधारमा तिलक थिएन, वस्त्रहरु पनि पश्चिमी शैलीका थिए । आहारको विषयमा तपाईंले दसैँ ताका फेसबुकमा बोलेका केही पोस्टहरु दोहो¥याएर पढेँ जुन हिन्दुहरुका लागि शास्त्रले वर्जित गरेको छ । पहिरनको विषयमा खास विशेष कुरा लेखेको जस्तो लागेन भनेर शास्त्र पढेका कृष्णप्रसाद अर्यालले भने, त्यसैले पहिरनतिर प्रश्न गर्दिनँ । अब एउटा प्रश्न बन्छ– एउटा बहर त¤वविहीन हुँदा त शास्त्रअनुरुप गजल बन्दैन भने के–के नमाने पनि हिन्दु बनिरहन पाइन्छ ? म हिन्दु होइन नभनिदिनुस् है, मलाई हृदयाघात हुन सक्छ । पूरै शास्त्रसम्मत रीत नपुगेको भए पनि हिन्दु संस्कृति तथा चाडपर्वहरु मानिएको आधारमा ‘हिन्दु’ मान्न सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा छ । मेरो लागि तपाईं हिन्दु नै हो । म पनि हो र पूर्णतः शास्त्रको रीत पु¥याउन नसक्ने अरु पनि हिन्दु नै हुन् ।
टिप्पणी प्रस्तुत गर्दै गर्दा डा. कृष्णहरि बरालले भन्नुभएको थियो, कता हो लगभग बराबर पंक्तिका शेर लेख्दा पनि हुन्छ भनेर लेखिएको छ रे ! योचाहिँ शास्त्रीयताभित्र पथ्र्यो कि पर्थेन कुन्नि !
बहरबाला कार्यपत्रमाथि डा. सनतकुमार वस्तीले ‘बहर चाहिन्छ तर त्यो बहरको लय आफैँभित्र हुन्छ, जे स्रष्टाको भित्रबाट लय आउँछ त्यही नै हो बहर, त्यसैमा लेख्नुस्’ भन्ने आसय व्यक्त गर्नुभयो । यो कुरा कार्यपत्र लेखक घनेन्द्रलाई मन परेन । यसैलाई आधार बनाएर अग्रजहरुले अडान कायम गर्न नसकेकोप्रति खत्रै गाली गरिदिनुभयो । परर ताली पनि बज्यो । मैले पनि मजा मानेँ । हो कि जस्तो त मलाई पनि लाग्यो । अडान नै नभए सिद्धान्त के काम ? तर, फेरि के–के के–के कल्पना आउन थाले । सोचेँ, बाँदरहरुले आफ्नो अडान कायम राखेर मान्छेमा रुपान्तरण हुन नचाहेको भए ! ढुङ्गे युगका मान्छेले आफ्नो जीवनशैलीप्रति अडान कायम राखिरहेको भए ! मेरो अडान भन्दै यो पृथ्वी घुम्न छोडेर एक ठाउँमा अडियो भने ! ओशोले भनेजस्तै एउटा बीउले ‘म बदलिन्नँ’ भन्ने अडान लियो भने ! अंकुराउन मानेन भने ! आफू त सड्छ नै, भोलि रुख बनेर करोडौँ नयाँ फलहरुमा आफूलाई फैलाउन सकिने अवसर पनि गुमाउँछ । तपाईंचाहिँ कस्तो अडान कायम राख्न आफ्ना गुरूहरुलाई ‘निर्देश’ गर्दै हुनुहुन्छ ? जुन गुरूलाई दाइ पनि सम्बोधन गर्नुभएको थियो, तपाईंहरुको खास सम्बन्ध के भन्नेमा म अन्योलमा परेँ । गाली गरिरहनुभएको थियो उहाँ तपाईंको गालीमा पनि गद्गद देखिनुभएको थियो । कल्पना गर्नुस् त ! तिनै गुरूहरुले आदि ऋषिमुनिहरुको कालदेखि नै आफ्नो ज्ञान कसैलाई नबाँड्ने अडान राखेको भए ! अडान न हो । जसले जे पनि राख्न सक्छ नि ! तपाईं एउटा सानो सिद्धान्तको अडानको कुरा गर्नुहुन्छ । हेर्नु त, आफ्नो सिद्धान्तमा नअडिने नेतालाई कति फाइदा भएको छ, कांग्रेसतिर मिल्न जाँदा पनि फाइदा, कम्युनिस्टतिर मिल्न जाँदा पनि फाइदा । क्या काइदा !
अँ साँच्ची, थोमस आल्बा इडिसनले विकास गरेको ‘डाइरेक्ट करेन्ट’ र योभन्दा राम्रो अर्को हुनै सक्दैन भन्ने उनको अडान कायम रहिरहेको भए र त्यो अडानलाई पत्याएर निकोलस टेस्लाले ‘अल्टरनेटिङ करेन्ट’को विकास नगरेको भए कल्पना गर्नुस् त दुनियाँ कुन युगमा अल्झिरहेको हुन्थ्यो होला !
कार्यपत्रहरु र तिनका टिप्पणीमाथि प्रश्न गर्न ‘फ्लोर’ खुला गरियो । प्रश्न सुन्न म पनि आतुर थिएँ । आवाज शर्माको हातमा माइक पुग्यो । ‘समथिङ विल गो इन्ट्रेस्टिङ ।’ ‘तपाईं बच्चाचाहिँ आफैँ जन्माउने अनि न्वारान गर्न छिमेकीलाई बोलाउने ?’ ह्वाट अ क्वेस्चन ! पररररररर ताली बज्यो । तपाईंको आसय थियो– ‘रचना तपाईंको आफ्नो प्रकृतिको अनि ‘गजल’ शीर्षकचाहिँ अरबी र फारसी भाषाको ?’ आसय यो पनि थियो– ‘तपाईं आफ्नो स्टायलको रचना लेखिरहनुभएको छ भने आफ्नै नयाँ नाम राख्नुस् न !’ मैले बुझेको आसय गलत हो भने मलाई सच्याउनू है । तपाईंकै प्रश्नलाई आधार मानेर तपाईंलाई नै प्रश्न– त्यसो हो भने अरुले लेखेको रचनालाई तपाईं किन नाम दिन खोजिराख्नुभएको छ ? जसले रचना लेखेको छ उसैलाई नाम राख्न दिनुस् । बडे गुलाम अली खानको गायकीको ठूलो फ्यान थिए, हामीले चिनेका पाकिस्तानी गायक गुलाम अलीका बुबा । त्यसैले, आफ्नो छोराको नाम पनि गुलाम अली नै राखिदिए । बडे गुलाम अली खानसँगै तालिम पनि गराए । ती गुलाम अलीले ‘तेरो छोराको नाम किन मेरो जस्तो राखिस्’ भनेर निहुँ खोजेनन् । आफूजस्तै बनोस् भन्ने आसयले तालिम दिए । यिनी उही नामले आफू परिचित भए । प्रसङ्ग मिलेन ? आफ्नो कुरा राख्नका लागि यताउता जताबाट पनि प्रसङ्ग निकाली राख्न सकिन्छ भन्ने तपाईंबाटै सिकेको, दौरा र टिसर्टको प्रसङ्गजस्तै ।
दौरा र टिसर्टको प्रसङ्ग पनि राम्रो थियो तपाईंले उठाएको । यसले पनि मेरो ध्यान तान्यो । तपाईं विषयभन्दा बाहिरबाट प्रतीकहरु तानेर तर्क गर्नुहुन्छ भने अरु थप तर्कहरु जन्मन सक्छन् भन्ने कुरामा तयार रहनुपर्छ । मेरो तर्क तन्कियो । तपाईंले भनेको ठीक हो । हामीले दौरा छोडेर टिसर्ट लगाइसक्यौँ भने अझै पनि यसलाई दौरा नै भन्न मिल्दैन । बुबाले लगाउनुभएको दौरा थियो र हामीले लगाउन थालेको टिसर्ट हो । तर, यी दुइटै साधन हुन्, साध्य होइनन् । साधनको काम साध्यलाई पुष्टि गर्नु हो, सहयोग गर्नु हो । पहिरनले कि परिचय कायम राख्छ कि मौसमबाट सुरक्षा दिन्छ वा लाजको रक्षा गर्छ । सहि हो ? दौरा, ढाका टोपीले नेपाली हुनुको परिचय राख्थ्यो । मौसमबाट सुरक्षामा पनि काम लाग्थ्यो र यसैले लाजको पनि रक्षा गथ्र्यो । अहिले टिसर्ट लगाउँदा यो कुरामा कमी आयो र ? अँ, दौरा लगाउँदाको र टिसर्ट लगाउँदाको आकर्षणमा देख्ने, हेर्नेहरुलाई भिन्नता महसुस हुन्छ । एउटा बहरमा गाउँदा एउटा मजा, अर्कोमा गाउँदा अर्कै मजा, बेबहरमा सुनाउँदा उस्तै मजा । मजा त आखिर मजा न हो । चौबन्दीमा पटुकी बाँध्या छैन भन्दैमा नेपाली हैन भन्न नपाइने गीत घन्किरहन्छन् नि बेलाबेला, त्यस्तै क्या । यसलाई अझ धेरै लम्ब्याउन सकिन्छ, तर रोकिन्छु । मलाई थकाइ पनि त लाग्छ नि मित्र !
यी कुराहरु जति गरे पनि सकिँदैनन् । बहरमा लेख्नेहरु एउटा उदाहरण दिनुहुन्छ । नलेख्नेहरु अर्को उदाहरण दिनुहुन्छ । तर्कमाथि तर्क । रायमाथि राय । झगडा ग¥यो । सामाजिक सञ्जाल ततायो । एउटाले अर्कोलाई तल पार्न खोज्यो, आफू माथि पर्न खोज्यो । अडान जहाँको तहीँ । विचार जहाँको तहीँ । यतिन्जेलको मेरा तर्कहरुबाट तपाईंहरुले मलाई गजलमा छन्द, बहर प्रयोगको विरोधी रहेछ भनेर बुझ्नुभयो भने माफ गर्नुस् है । यो कुरा गलत हो । गजल महोत्सवमा बहरमै लेख्नुपर्छ भन्नेहरुको आवाज अनावश्यक चर्को लागेकोले मात्रै यस्ता प्रश्न गरेँ । नत्र, मसँग ‘बहरमा नलेखे पनि हुन्छ, हामी बहरमा लेख्दैनौँ’ भन्नेहरुका लागि पनि प्रश्न थिए, छन् । तपाईंहरुमाथि धेरै प्रश्न सोध्नुको कारण यो पनि हो कि तपाईंहरुले बहरमा लेख्न नचाहने पुस्तालाई यसप्रति आकर्षित गर्नुको साटो झन् वितृष्णा पैदा हुने शैली अपनाउनुभयो । सिकाउन पथ्र्यो, धम्क्याउनुभयो । अनुरोध गर्नुपथ्र्यो, तर्साउनुभयो । जसरी विभिन्न अभियानमार्फत धेरैले बहर सिक्नुभयो र यसमा लेख्ने प्रयास गर्नुभयो त्यसरी नै यसको आकर्षणलाई फैलाउँदै मात्र गए पनि धेरै प्रगति गर्न सकिन्थ्यो । तर, धेरै जना उत्तेजनामा आउनुभयो र लामो समयदेखि लेखिँदै आएको सृजनामाथि आक्रमण गर्नुभयो । ‘गजल नै भएन’ भनिदिनुभयो । यो शैली ठीक थिएन ।
एउटा तीतो कुरा भनूँ, धेरै जनामा गजलमा बहरको प्रयोगबारे खोजी त्यसपछि मात्र भएको देखिन्छ जब अरु थुप्रै स्रष्टाहरुले गजल लेखेर वाहवाही कमाए, अभियान चलाए, नेपाली गजललाई उत्कर्षमा पु¥याए, तर केही स्रष्टाहरुको गजलले स्थान पाउन सकेनन् । गजल बहरमा नै लेखिनुपर्छ भन्ने पहिलो सर्त राखेर सिकाउने गुरूहरुको उपस्थिति पनि त थिएन नि । जब नेपाली गजल एउटा उत्कर्षमा पुग्न खोजिरहेको थियो, तपाईंहरु टुप्लुक्क आइपुग्नुभयो र लामो समयदेखि गजल लेखिरहेकाहरुलाई गाली गर्न थाल्नुभयो । यो तरिका सही थिएन । यस्तो देखिन्छ कि यो सब गजलको मूलधार अरु कसैले ओगटेर बस्ने तर कसैको भने नामोनिसान भेटिन गाह्रो हुनुले निम्त्याएको सकसको परिणाम हो । यस्तो नहोला र नहोस् पनि भन्छु । नेपाली गजल अझ एक खुड्किला माथि जाओस् भनेर चिन्ता गरिरहनुभएको छ । यसलाई म पूर्णतया सकारात्मक मान्छु, मेरो आपत्ति तपाईंहरुको चर्को आवाजमा हो, शैलीमा हो । नाम नलिईकन एउटा उदाहरण दिन्छु । पहिले डा. घनश्याम परिश्रमीले गजल बहरमा नै लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउँदा विरोध गर्ने एक जना सर्जकले यसको विरोध गर्नुभयो र बेबहरमा गजल लेखेर ‘नाम कमाउन’ कोसिस गर्नुभयो । लामो समयसम्म उहाँ अस्तित्वमा अटाउन सक्नुभएन र पछि फर्केर परिश्रमीलाई नै गुरू मानेर गजल बहरमा नै लेखिनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्नुभयो । उहाँको आन्दोलनमा अरु पनि विषय छन्, तर राम्रो गजल लेखेर देखाउन नसकेको कारण उहाँको आन्दोलन उठ्न सकेको छैन ।
अब विपरीत प्रश्न :
नेपाली भाषामा गजल लेख्न सकिन्छ, राम्रो गजल लेख्न सकिन्छ, उत्कृष्ट रचना दिन सकिन्छ भनेर प्रमाणित भइसकेको छ । यसका लागि लामो समयदेखि तपाईंहरु लागिरहनुभएको छ । सफल भइरहनुभएको छ । तर, के यो उत्कृष्टताको टुङ्गो छ ? के यो एउटा बिन्दुमा पुगेर रोकिन्छ ? के त्यसपछि जान्नुपर्ने थप कुरा केही बाँकी रहन्न ? सिकाइको एउटा तहमा पुगेर म योभन्दा माथि जान्नँ भन्न कसरी सुहाउँछ ? के म अझ एक तह माथिको कुरा सिकूँ र अझ राम्रो गर्न सकूँ भन्ने चाहनाको सीमा हुन्छ ? पढ्न जानेँ अब लेख्न सिक्दिनँ, उठ्न जानेँ अब हिँड्न सिक्दिनँ, हिँड्न सिकेँ अब दौडिन सिक्दिनँ, के यी कुरा ठीक हुन् र ? चिर्नमात्रै सिकेर एउटा सर्जनको अध्ययन सकिँदैन । उडाउन र उतार्नमात्रै सिकेर पाइलट बनिँदैन । आकस्मिक अवस्थाको लागि तयार रहन सक्ने पनि हुनुपर्छ ।
सिकाइको निरन्तर प्रक्रिया हुन्छ । यो कहीँ पनि रोकिन्न । सिक्दिनँ भन्दाभन्दै पनि सिकिन्छ । हिँड्दिन भन्दाभन्दै पनि हिँडिन्छ । रोकिने भए काफिया सिक्नेबित्तिकै रोकिइन्थ्यो, रोकिइएन । शेर जानेर अघाइन्थ्यो, भोक जागिनै राख्यो । अन्दाज–ए–बयाँ सिक्न रहर कसरी जाग्यो ? मिस्राहरु बीचमा ‘प्याराडक्सिकल’ सम्बन्ध बनाए शेर ‘चमत्कारिक’ बन्छ भन्ने पनि त जानियो नि जान्दाजान्दै । यत्रो वर्षदेखि यत्रा मान्छेहरुले जानिसकेको छन्द वा बहर कसरी हाउगुजी बन्न पुग्यो ? मलाई थाहा छ, यसलाई हाउगुजी बनाएर आफू ‘सुपेरियर’ देखिन चाहनेहरुले गर्दा यसो भएको हो । थोरै बढी अभ्यास न हो । खुट्टा उचाल्ने चाहनामात्रै न हो । ओशो भन्छन्– ‘सोच्यौ त ग¥यौ, हिँड्यौ त पुग्यौ, चाह्यौ त पायौ ।’
बुँदा नं ३ :
अन्योलमा परेका स्रष्टाहरुको गाँठो फुकाइदेला भन्ने अपेक्षा गरिएको सभाले जारी गरेको घोषणापत्रले झन् धेरै अन्योलता सृजना गरेको धेरैको ठहर छ । मेरो पनि यही ठहर थियो । केही फरक–फरक निष्कर्ष पनि निकालेँ । फेरि घोषणापत्र तयारी समितिका संयोजकले घोषणापत्रको तेस्रो बुँदा पढेर सुनाउँदै गर्दा ‘यसलाई बुझ्नुस् है’ भनेर केहीपटक दोहो¥याउनुभएको थियो । मैले त्यो सम्झेँ र धेरैबेर यसमा घोत्लिएँ । ‘आफूभित्र खोज, समाधान त्यहीँ छ’, ओशोले भनेजस्तो मेरो समाधान निस्कियो । मलाई लाग्छ, यो समाधान तपाईंलाई पनि काम लाग्छ, सबैलाई काम लाग्छ । यो बुँदाको निष्कर्ष पक्का पनि यही नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो ठहर छ । यसलाई बुझ्नका लागि सबैभन्दा पहिला मैले यो बुँदालाई टुक्रा पारेँ र दोस्रो भागलाई पहिले बुझेँ।
‘नेपाली गजल लेखनको मौलिक पक्षलाई यो सभा सम्मान गर्दछ ।’
अर्थात्, अब उपरान्त बहर वा छन्दबेगर आफ्नै मौलिक शैलीमा लेखिएका गजलहरुलाई पहिलेजस्तो अपमान गर्ने, ‘गजल भएन, यो गजल नै होइन’ भन्ने, होच्याउने गर्न पाइने छैन । मेरो त तर्क छ, जसले जस्तोसुकै लेखोस् होच्याउनु जरूरी किन छ ? जसले जति जानेको छ उति नै लेख्छ । राम्रो लेखिएका शेरलाई पाठकले, सभाले यस्सै अनुमोदन गर्छन् । मन नपरेका शेर र सर्जक यत्तिकै पाखा लाग्दै जान्छन् । सबैले आफ्नो क्षमताअनुसार लेख्छन् । प्रगति गर्न चाहने र सक्नेले गर्छन् । यो सब स्वाभाविक हो । राम्रो÷नराम्रोको आधारमा कसैलाई उपहास गर्नु जरूरी छैन । आफूले सकेको गरौँ, बस् ।
बहर पक्षधर आदरणीय अग्रज, दाजु, मित्रहरु ! यो बुँदाअनुसार घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्नेहरुले यो कुरा स्वीकार गरिसक्नुभएको छ कि केवल बहर वा छन्दको उपस्थिति छैन भन्दैमा तपाईं कसैको गजललाई गजल भएन भन्न पाउनुहुन्न र त्यसको सम्मान गर्नुहुनेछ ।
‘गजलको सैद्धान्तिक पक्षलाई आत्मसात् गर्दै गजल बहर वा छन्दमा लेखिनुपर्छ भन्ने कुरालाई मनन गरी…।
अर्थात्, बहरविहीन गजल सृजना गर्न पाइन्छ । कसैले गजल भएन भन्ने छैनन् । कोही अराजक त¤व हाबी हुन खोजे भने पनि तिनलाई मनमनै ‘गो टू हेल’ भनेर अगाडि बढ्न पाइन्छ । तर, यत्तिकैमा तपाईं सन्तुष्ट हुन पाउनुहुन्न । तपाईंले यो मनन गरिरहनुपर्ने छ कि सबै कुरा उत्कृष्ट दिएर पनि एक पाइला तलै छु । चढ्नुपर्ने एउटा पाइला अझै बाँकी नै छ ।
सिक्ने कुरा न हो, सिकिहालिन्छ । गजलको लागि यत्रो समर्पण छ, यत्रो प्रेम छ । यसबारे एउटा विषय नजानीकन मलाई पुग्यो भन्न पनि त भएन नि । तपाईंले प्रेम गरेको व्यक्तिको बारेमा एउटा कुरामात्रै पनि जान्न छुट्यो भने कस्तो लाग्छ ? प्रेम त तपाईंलाई कुनै न कुनै समयमा, कुनै न कुनै रुपमा पक्का पनि भएको छ । यसको अनुभव त छ नि होइन र ? त आउनुस्, मिलेर गजलको यो अर्को विषय पनि जानिदिऊँ, के नै जान्छ र !
बुँदा नं ४ :
‘गजलमा अन्तर्वस्तु र रुप पक्षमा सन्तुलन हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई अङ्गीकार गर्दै विचार, तर्क र कल्पनाको प्रस्तुति चमत्कारपूर्ण हुनुपर्छ ।’
यो बुँदा अझ विशेष छ । तेस्रो बुँदाको कुरा पूरा हुनका लागि चौँथो बुँदाको पालना अपरिहार्य छ । अर्थात्, बहर मनन गरिसकेकाहरुले (घोक्नेहरुले) पनि यत्तिकैमा गजल बनाएँ भनेर नाक ठाडो गर्न पाउने छैनन् । यदि बहरमात्रै छ र शेर चमत्कारपूर्ण अर्थात् अन्दाज–ए–बयाँयुक्त छैन भने त्यो गजल सबैभन्दा पहिला ‘खारेज’ हुनेछ । केवल बहरको अनुपस्थिति भएको शेर ‘चमत्कारपूर्ण’ छ भने त्यसले सम्मान पाउनेछ, बहरमात्रै छ तर चमत्कार गर्न सकेन भने त्यो शेर ‘खारेज’ हुनेछ ।
मेरो ठहर यो पनि छ कि बहर घोक्नेहरुलाई गजल कसरी ‘चमत्कारपूर्ण’ हुन्छ भन्ने पत्तो पाउन धेरै समय लाग्नेछ, तर तपाईं गजलको चमत्कार बुझिसकेकाहरुलाई बहर बुझ्न त्यति समय लाग्ने छैन । यो मेरो ‘ग्यारेन्टी’ हो ।
मलाई हतार छ [आजको कविता]
बनकट्टा–देवेन्द्रपुर सडक : क्रसरले उत्पादन नदिँदा पिच गर्न ढिलाइ